‘मण्डन शहरी पूर्वाधार’ मा के-के समेटिन्छन् ? – मिलिजुली खबर
‘मण्डन शहरी पूर्वाधार’ मा के-के समेटिन्छन् ?
नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा काभ्रेको सबैभन्दा कान्छो नगरपालिकालाई मण्डनदेउपुरमा ‘मण्डन शहरी पूर्वाधार’ विकास गरिने बताउनुभयो । त्यसै अनुसार बजेट पनि बिनियोजन गरिएको छ । साउन एक गतेदेखि बजेट कार्यन्वयनको चरणमा जानेछ ।
काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला संघीय राजधानी काठमाडौं नजिकको बैकल्पिक शहरी सम्भावनाको जिल्ला हो । यहाँ बनेपा, धुलिखेल, पनौती, नमोबुद्ध, पाँचखाल र मण्डनदेउपुर सहित ६ ओटा नगरपलिका र चौंरीदेउराली, भुम्लु, तेमाल, रोशी, बेथानचोक, महाभाारत र खानीखोला सहित ७ गाउँपालिका रहेका छन् ।
ती १३ तह मध्येको सबैभन्दा पछि अर्थात स्थानीय तहको पुन: संरचना हुने बेला घोषणा भएको नगरपालिका हो “मण्डनदेउपुर” । त्यसैले पनि होला यहाँका राजनैतिक दल र नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले अरु सबै विर्षिएपनि कहिल्यै नविर्षने एउटै शब्दावली छ । त्यो हो जिल्लाकै ‘कान्छो नगरपालिका’ ।
मण्डनदेउपुर भैगोलिक हिसाबले आलौकिक विविधता भएको नगरपालिका हो । नगर र शहरी विकासमा यसले धेरै फड्को मार्न बाँकी छ । यसको क्षेत्रफल शहरी दृश्यावलोकन गर्ने पर्यटकीय नगरी नगरकोटदेखि खोलानालाको दृश्यावलोकन गर्ने बेसीको दोलालघाट छेउ ज्याम्दीसम्म लमतन्न रहेको छ ।
वातावरणीय कुरा गर्ने हो भनेपनि यो एउटा अचम्मकै वातावरण भएको नगरपालिका हो । यहाँको भूगोलमा मजाको जाडोदेखि खपिनसक्नुको गर्मीको अनुभव गर्न सकिन्छ । ज्याम्दी, चण्डेनी, जैसिथोक, कुन्तावेसी, सिपाघाट लगायत मण्डनको बेसी भेगको गर्मी छल्न खोज्ने हो भने जम्मा जम्मी १८ कि.मी.को दूरी भित्र नाल्दुम, नगरकोट, नयाँगाउँ लगायत देउपुर भेगको आनन्दित चिसो महसुश गर्न सकिन्छ ।
एकै साथ कृषि र पर्यटनको क्षेत्रमा प्रचुर काम गर्न सकिने थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । नगरकोटमा आएका पर्यटकहरु चाहे ती आन्तरिक हुन् वा बाह्य । तिनलाई नयाँगाउँ र देउपुर भेगको आनन्द लिंदै मण्डनका थानडाँडा सुलिकोट, जितारी पोखरी, मैदानका मनोरम दृश्य, ज्याम्दीको वुद्ध थुम्का, रामपुर र देउराली लगायतका डाँडाहरुमा शयर गराउन सकिन्छ ।
बाह्रै महिना हरियाली हेर्ने हो भनेपनि कुन्ताबेसी, सिपाघाट, जैसिथोक, चण्डेनी बेसी जोगिटार, सान्डीबेसी, ठूल्ठी लगायत ठाउँमा मनोरम हरियालीको कमी छैन । चैत्रमा धान, मकै, असारमा पुनः धान, कार्तिक मंसिरमा आलु यहाँको पूरानो खेती प्रणाली हो । पूरानो खोती बालीको अलावा यहाँका विभिन्न भूगोलहरुमा थुप्रै र विभिन्न खाले तरकारीहरुको समेत उब्जनी हुने गर्दछ ।
यहाँ थुप्रै रमणीय ठउँहरु छन् । मठ मन्दिर र पाटी, पौवाको कुरा गर्ने हो भने यहाँ माई ब्रम्हयणी, उमादेवी माई, कश्यपेश्वर महादेव लगायत मठ मन्दिरहरु रहेका छन् । विगतलाई नियालेर हेर्ने हो भनेपनि यो एउटा काठमाडौं प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण नाकापनि हो । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र कोशीपूर्वका मानिसहरु गैह्रिविसौना हुँदै नगरकोटबाट भक्तपुर र काठमाडौं प्रवेश गर्ने गरेको इतिहास छ ।
यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा यस भेगको नर्बन्दा पाटी, गैह्रिविसौना, कुन्तावेसी, हिंगुवापाटी लगायतका ठाउँहरुमा भएको पूरानो पाटी पौवाहरु हुन् । जुन आज नासिँदै र मासिँदै जान थालेका छन् ।
यी र यसखाले थुप्रै कुराहरुको समायोजन हो मण्डनदेउपुर नगरपालिका । त्यति मात्र नभएर हिजोको नयाँगाउँ देउपुर, बालुवापाटी देउपुर र गैह्रिबिसौना देउपुर सहितको ३ देउपुर अनि जैसिथोक मण्डन, महादेवस्थान मण्डन, चण्डेनी मण्डन र ज्याम्दी मण्डन सहितको ४ मण्डनको संगालो पनि हो काभ्रेको मण्डनदेउपुर नगरपालिका ।
यीनै कुराहरुको दीर्घकालिन विकासको लामो सोच र बिचारको नाम हो “मण्डन शहरी पूर्वाधार”। नेपाल सरकारले यस पटक ल्याएको जनपक्षीय बजेटमा काभ्रेका धेरै कुरा र विषय वस्तुहरु समेटिएका छन् । त्यसमध्ये अलिक फरक र नयाँ कुराको रुपमा धेरैले चर्चा गर्दै र चासो राख्दै आएको विषय हो मण्डनदेउपुर भेगको दीर्घकालिन मार्ग चित्र अर्थात “मण्डन शहरी पूर्वाधार”।
अरु धेरै कुराको बाबजुद के चाहिँ पक्कै हो भने काभ्रेको मण्डनदेउपुर सबैभन्दा पछि बनेको नगरपालिका हो । यसो भनिरहँदा जहिल्यै कान्छो भएर विकासले गति लिनपनि त सक्दैन । हामी पछि बनेको नगरपालिका भने निच मारी बस्ने र त्यसैलाई एउटा कारण मानिरहने हो भने विकासचार्हि कहिले हुने भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ ।
त्यसैले मण्डनदेउपुरलाई जहिल्यै कान्छो नगरपालिकाको भाषणबाजीबाट माथी उठाउँन यहाँका प्रकृतिक सम्पदा, वन पैदावर, खोलानाला, कृषि योग्य जमिन, पर्यटनको प्रवद्धन, जलचर तथा सिमसारको संरक्षण, पाटीपौवा, वन जंगल र मठमन्दिरको समुचित विकास तथा प्रवर्द्धन, नगर स्तरीय बृहत खानेपानीको कार्यक्रम, खोलानालाको उचित व्यवस्थापन र करिडोर निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।
बैकल्पिक सडक मार्गहरु, विभिन्न खालका चिल्ड्रेन तथा मनोरञ्जन पार्कहरु, शहरकिरण वढ्दै जाँदा उत्पन्न हुने ढल व्यवस्थापन, विभिन्न खालका कुहिने र नकुहिने खालका फोहोर मैलाको व्यवथापन र प्रशोधन, सडकहरुको स्तरोन्नती, खानी तथा उत्खनन्जन्य वस्तुको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण लगायतका कुराहरुको समुच्चित अध्ययन र त्यसको दीर्घकालिन विकासको फड्कोको नाम हो खास अर्थमा “मण्डन शहरी पूर्वाधार” ।
काभ्रेका अरु नगरपालिकाहरुको तुलनामा पूर्वाधारका हिसाबले धेरै कामहरु गर्न बाँकी रहेको नगरपालिका हो मण्डनदेउपुर । यहाँ भर्खर अस्पताल बन्दै छ । नगरको प्रशासनिक भवन बन्ने क्रममा नै छ । वडा कार्यालयहरुदेखि धेरै कार्यालयहरु भाडामा संचालित छन् । एम्बुलेन्सको पर्यााप्तता छैन ।
डढेलो र आगलाजी जस्ता विकराल समस्या समाधानका लागि दमकलको व्यस्था छैन । नगरमा एकिकृत खालको प्रहरी कार्यालय छैन । एउटा नगरमा ५ तिरको अस्थायी प्रहरी पोष्टमार्फत काम गर्नुपर्ने वातावरण छ । बाटाघाटा वर्षातमा हिलाम्बै र हिंउँदमा धुलाम्मै हुने अवस्था कायमै छ । वर्षै साल त्यहि पूरानै सडकको मर्मत र ग्राभेलका नाममा पैसा राख्ने चलन छ ।
दीर्घकालिन योजना र सोचका साथ कामहरु नगरिंदा विकासे बजेटको खासै प्रभावकारिता देखिन सकिरहेको छैन । असार मसान्त सम्ममा ग्राभेल हुने र भदौ नसकिंदै जस्ताको त्यस्तै हुने दूरावस्था कायमै छ । यस कारणले गर्दा काभ्रेका सबै नगरपालिकाहरुमा भन्दा विल्कुल फरक खालको कार्यक्रम “मण्डन शहरी विकास”को अवधारणा अगाडी सारिएको हो ।
यी सबै खालका कामहरु गर्न एउटै आर्थिक वर्षको सिमित बजेटले सम्भवपनि छैन । जिल्लाकै पूराना नगरपालिकाहरुको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भनेपनि एक दुई साल अगाडीबाट जम्माजमी ४/५ करोडको बजेटबाट शुरु गरिएका शहरी विकास र पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु आज अरबौं र त्यति मात्र नभएर स्मार्ट सिटीको तहमा पुग्न थालेको छ । मण्डनदेउपुरले ठ्याक्कै त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पछ्याउने भन्दापनि यहाँको भूगोल र माटो सुहाउँदो विकासे मर्ग चित्र कोर्न ढिला भैसकेको छ ।
त्यसैले यस आर्थिक वर्षबाट ३ करोड बजेट मार्फत “मण्डन शहरी पूर्वाधार” अन्तर्गत यी सबै विषय वस्तुहरु समेटीे दीर्घकालिन सम्भाब्यता अध्ययनको सशक्त थालनी हुने छ । प्रारम्भिक रुपमा ३/४ करोड मात्र बजेटबाट शुरु गरी आगामी आर्थिक वर्षहरुमा यसको क्षेत्र र दायरा फराकिलो पार्दै ५ देखि १० वर्ष भित्रमा मण्डनदेउपुर नगरपालिकालाई भाषणबाजीको कान्छो नगरपालिकाबाट माथी उठाई हामी काभ्रेका ६ ओटा नगरपालिकाहरु मध्येको एक उदाहरणीय नगरको रूपमा अघि बढ्नेछ ।
“मण्डन शहरी विकास” जस्तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम नेपाल सरकारका पूर्व प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रि माननीय गोकुल बास्कोटाले अघि सार्नुभएको हो । आशा गरौं, बाँस्कोटाले अघि सारेको त्यसखालको मार्ग चित्रमा टेक्दै अगाडी बढ्न सके हामी मण्डनदेउपुर बासीको विकासमा काँचुली फेर्ने छ ।
:- होम चौलागाई
रिहा भए काँग्रेस नेता गणेश लामा